Ketogenic Diet အလုပ်လုပ်ပုံ - ဘရာဇီးကို ဖြည့်စွက်ပါ။
အားဖြင့် ဒေါက်တာ Lis Lenzi အာဟာရပညာရှင်
ဇန်နဝါရီလ 5, 2022 ဇန်နဝါရီလ 10, 2022
ketogenic အစားအသောက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ခန္ဓာကိုယ်သည် ketosis သို့ရောက်ရှိရန်မည်မျှကြာသနည်း။
ketogenic အစားအစာတွင် သင်ဘာစားနိုင်သနည်း။
ketogenic အစားအစာတွင် သင်မည်မျှပေါင်ကျနိုင်သနည်း။
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ်
၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ, အစားအသောက်များတွင် နှစ်အတော်ကြာအောင် နှစ်ခြိုက်လာခဲ့ပါပြီ။ ၎င်း၏အောင်မြင်မှုသည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုနည်းခြင်းနှင့် အဆီနှင့် ပရိုတင်းဓာတ်များ စားသုံးမှုမြင့်မားခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျင်မြန်စွာ လျှော့ချနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ၎င်းသည်အလွန်ကန့်သတ်ထားသောအစားအစာဖြစ်သောကြောင့်၊ အများအပြားယူဆောင်လာနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အချိန်အကြာကြီး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လူတိုင်းမလုပ်သင့်ပါဘူး။
၎င်းသည် ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကို ကုသရာတွင် ကုထုံးဆိုင်ရာ အစားအစာအဖြစ် XNUMX ရာစုအစတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းမှုအတွက် ကျော်ကြားလာကာ နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အချို့သော ရှေ့နေများက ၎င်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဆီးချိုရောဂါကင်ဆာ၊ နဗ်ကြောရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်နှင့် အယ်လ်ဇိုင်းမား။
အိုင်ဒီယာက ကြာရှည်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးထားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အသည်းရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းကနေ ထွက်လာတဲ့ ketone တွေကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ အဆီ ဂလူးကို့စ်တွင် သွေးထဲတွင် ပမာဏများသောကြောင့်၊ ketone များသည် ဝက်ရူးပြန်တက်ခြင်း၏ အကြိမ်ရေကို လျော့နည်းစေသည်။
သိသိသာသာလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၏အဓိကအရင်းအမြစ် အင်အားခန္ဓာကိုယ်သည် အသည်းမှပြောင်းလဲပြီး ketosis ဟုခေါ်သော ဇီဝဖြစ်စဉ်အခြေအနေကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အဆီကဲ့သို့သော အခြားအစားထိုးလောင်စာအရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေသည်။
ဤအခြေအနေသို့ ခန္ဓာကိုယ်က ဝင်ရောက်လာသောအခါ အဆီအား စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် မြင့်မားစွာ ထိရောက်မှုရှိလာပြီး ထွက်လာသော ketone ခန္ဓာကိုယ်များသည် ghrelin ကဲ့သို့သော အစာစားချင်စိတ်တွင် ပါဝင်သော ဟော်မုန်းများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
>>> ဖတ်ရန် ပိန် Mass: ကဘာလဲ? ဘယ်လိုအနိုင်ရမလဲ မင်းရဲ့အဖြေအားလုံးဒီမှာပါ။
၎င်းတို့သည် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နှင့် အင်ဆူလင်ပမာဏကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးကာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကို ကုသခြင်း၊ မူးရူးမောပန်းစားခြင်း၊ စိတ်ကြွရောဂါ၊ အော်တစ်ဇင်၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းစသည့် အခြားသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်းသော ketosis သို့ရောက်ရှိရန် ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အထိ ကြာပါသည်။
ဤဖြစ်စဉ်တွင် အချို့သောလက္ခဏာများဖြစ်သည့် အနံ့အသက်ဆိုး၊ ခံတွင်းရှိသတ္တုအရသာ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ အားကစားလုပ်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု ကျဆင်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်းနှင့် ပျို့အန်ခြင်းစသည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီးနောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်သည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းသစ်တွင် အသုံးကျလာပြီး ယင်းလက္ခဏာများ ပျောက်သွားသည်။
ဤလက္ခဏာများကို လျှော့ချရန်အတွက် သင်သည် ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ကစီဓာတ်နည်းသော အစားအစာကို စတင်နိုင်ပြီး ကစီဓာတ်ကို လုံးဝဖယ်ရှားသည်အထိ သင့်အဆီစားသုံးမှု တဖြည်းဖြည်း တိုးလာနိုင်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းသည် အဆီ 75%၊ ပရိုတင်း 20% နှင့် ကစီဓာတ် 5% တို့ဖြစ်သည်။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုသည် တစ်နေ့လျှင် 20 မှ 50 ဂရမ်ကြားရှိသည်။
ရည်မှန်းချက်တစ်ခုစီနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလိုက် မက်ခရိုအာဟာရဓာတ်ပမာဏကို တစ်ဦးချင်း ခွဲခြားထားပါသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးကို ခွင့်ပြုထားပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပမာဏပိုများသော အာလူး၊ ပီလောပီနံနှင့် ဥများမှအပ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံးနီးပါးကို ခွင့်ပြုထားသည်။
ခွင့်ပြုထားသောအသီးအနှံများမှာ အုန်းသီးနှင့် ထောပတ်သီးများဖြစ်သည်။
ထောပတ်၊ အခွံမာသီး၊ အချဉ်မုန့်နှင့် ဝက်ဆီကဲ့သို့သော အဆီအရင်းအမြစ်များ မီနူးတွင်ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအဆီများ- Extra virgin သံလွင်ဆီ၊ ထောပတ်သီးဆီ၊ flaxseed ဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ အုန်းဆီ...
အစေ့အဆန်များဖြစ်သည့် မြေပဲ သို့မဟုတ် မြေပဲထောပတ်၊ ဗာဒံစေ့များ၊ Macadamias၊ flaxseed၊ chia၊ နေကြာစေ့၊ ရွှေဖရုံစေ့၊
>>> ဖတ်ရန် Saxenda: နောက်ဆုံးပေါ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့ဆေး။
mozzarella၊ gorgonzola၊ ဆိတ်၊ အပြာကဲ့သို့သော အဆီချိစ်များ
ကြက်ဥ၊ အမဲသား၊ ကြက်သား၊ ကြက်ဆင်၊ ဝက်သား၊ ဘေကွန်
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသော မည်သည့်အစားအစာကိုမဆို မီနူးမှ လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်သင့်သည်-
အစာ သကြား- အချိုရည်များ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ ကိတ်မုန့်၊ ရေခဲမုန့်၊ ကွတ်ကီးများ၊ သကြားလုံးများ
ပဲမျိုးစုံ : ပဲ၊ ပဲနီ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲစေ့
အစေ့အဆန်များ ဂျုံ၊ ဆန်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ပေါင်မုန့်
ဥများ : အာလူး ၊ ပီနံ ၊ ကန်စွန်းဥ ၊ မျောက်ဥ
အသီးအနှံများ- ထောပတ်သီး၊ အုန်းသီးနှင့် စတော်ဘယ်ရီမှလွဲ၍ မည်သည့်အသီးမှ မရှိပါ။
အဆီမပါသော သို့မဟုတ် သကြားမပါသော အစားအသောက်များ
အရက် : ဘီယာ၊ စပျစ်ရည်နတ်၊
အဆင်သင့်လုပ်ထားသောဆော့စ်များ: ketchup, mayonnaise, မုန်ညင်း
တင်းကျပ်လွန်းသောကြောင့် ဤအစားအစာကို အချိန်တိုအတွင်း စားသုံးသင့်ပြီး ၎င်းသည် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများနှင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အာဟာရမျှတမှုမရှိသောကြောင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အာဟာရ အများဆုံး6လအထိ။
ဖြစ်ပွားနိုင်သည်- ရေဓာတ်hypercholesterolemia၊ hypoglycemia၊ အသည်းခြောက်ခြင်းအသည်းအဆီဖုံးခြင်း၊ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း၊ယူရစ်အက်ဆစ်မြင့်တက်ခြင်း၊ပြောင်းလဲမှုများ သံသရာ circadian ရစ်သမ်၊ သွေးတိုးအကျပ်အတည်းများနှင့် အပြောင်းအလဲများ ဇီဝြဖစ်.
ဤသည်မှာ တစ်ရက်စာမီနူး၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မနက်စာ - ဒိန်ချဉ် + စတော်ဘယ်ရီသီး + ထောပတ်ထဲမှာ မွှေထားတဲ့ ကြက်ဥ ၂ လုံး + အုန်းဆီပါတဲ့ ကော်ဖီ
နေ့လည်စာ : ဆော်လမွန်အသားလွှာ 1 ကောင်ကို သံလွင်ဆီနဲ့ ကင်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူထဲ ထည့်ထားတဲ့ ဘရိုကိုလီ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း + ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်မျိုးစုံ
သရေစာ- ဆီထွက်သီးနှံ လက်တစ်ဆုပ်စာ + စတော်ဘယ်ရီ နှင့် ဘလူးဘယ်ရီ + ထောပတ်သီး ½
ညစာ- ပေါင်ကင် ၁ လုံး + အသီးအရွက်များ + ရွှေဖရုံစေ့
ညစာ- ထောပတ်ထဲတွင် ဒိန်ခဲ omelet
လူတစ်ဦးစီတွင် ၎င်းတို့၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များရှိသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်မည်မျှ ဆုံးရှုံးမည်ကို သေချာရေတွက်ရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုသည် ပို၍ပင် ကြီးမားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
>>> ဖတ်ရန် Glycemic အညွှန်းနှင့် Glycemic ဝန်: သူတို့ကဘာတွေလဲ ခြားနားချက်ကဘာလဲ ဒီမှာရှာပါ။
ဤအစားအသောက်ကို ရုတ်ခြည်းကန့်သတ်ချက်အဖြစ် စီစဉ်သောအခါ ဂရုပြုသင့်သည်။ အာဟာရဓာတ် ၎င်းသည် အလွန်အကျွံအစာစားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဆာလောင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ပြန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ဆုံးရှုံးသွားသောကိုယ်အလေးချိန်ကို ပြန်လည်ရရှိရန် သို့မဟုတ် ယခင်ထက်ပင် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်လာနိုင်သည်။
အစားအသောက် အဆုံးတွင်၊ ဖယ်ရှားလိုက်သော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနိုင်သည့် အစားအစာဗျူဟာတစ်ခုတွင် တဖြည်းဖြည်း ထပ်မံထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဒေါက်တာ Lis Lenzi အာဟာရပညာရှင်
ကာယပညာသင်ကြားပေးသူနှင့် အာဟာရပညာရှင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်၏ဘဝကို မြှုပ်နှံထားပြီး၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အလှအပနှင့် အလှတရား၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အကြောင်းအရာများကို ယူဆောင်လာကာ၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘဝတစ်ခုကို ရှာဖွေလျက်၊ နောက်ဆုံးထွက်လေ့လာမှုများ အပ်ဒိတ်များနှင့် စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး။